Motivating Phrases (အပြုသဘောဆောင်သောအတွေးတွင်ကြားရသော) ၄၀ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ဘယ်နေရာမှာမဆိုရေးထားတဲ့နေရာမှာရှာမတွေ့နိုင်တဲ့စာကြောင်း ၄၀ ဖတ်ချင်ပါသလား။ ရေဒီယိုတွင်ထုတ်လွှင့်သောကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များမှသင့်အားအားတက်စေလိုပါသလား။ မင်းနေရာမှန်ကိုရောက်ပြီ
ဒါပေမယ့်စီးပွားရေးမစခင်မှာအောက်ပါဗီဒီယိုကိုကြည့်ဖို့သင့်ကိုဖိတ်ပါရစေ။ ကျနော့်အမြင်မှာတော့ အစဉ်အဆက်ဖန်တီးသောအကောင်းဆုံးစိတ်ခွန်အားနိုးဗီဒီယိုများထဲမှ။
ဒီဗီဒီယိုကိုခေါင်းစဉ်တပ်သည် "နေရောင်ကာကွယ်ဆေးကိုသုံးပါ"။ မိနစ်အနည်းငယ်ဖြုန်းပြီးသင်ပြီးဆုံးသောအခါမည်သို့ကွဲပြားခြားနားစွာနေထိုင်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဒီတစ်ခါလည်းသင်၌စိတ်ဝင်စားနေ: အကောင်းဆုံးအပြုသဘောအတွေးအခေါ် ၄၀
လွန်ခဲ့သောအချိန်ကရေဒီယိုမှပြသခဲ့သည် အကောင်းမြင်အတွေး ၎င်းကိုဆာဂျီယိုဖာနန်ဒက်စ်ကအကောင်းဆုံးနည်းပြတစ် ဦး က ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ဒီအစီအစဉ်မှာသူတို့ကဆိုပါတယ် ငါသည်ဤဆောင်းပါး၌ကိုယ့်ကိုကိုယ်စုဆောင်းရန်ခွင့်ပြုခဲ့သောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စာပိုဒ်တိုများ။ ဒီစကားစုအများစုဟာဆာဂျီယိုဖာနန်ဒက်ဇ်ကိုယ်တိုင်မှဖြစ်သည်။
1) “ ပျော်ရွှင်မှုရဖို့အပြင်ကိုတစ်ခုခုပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာထူးဆန်းနေတယ်။ စီးပွားရေး၊ သူဌေး၊ အိမ်နီးချင်း၊ စုံတွဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများ…ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်…ဒါပေမယ့်ထွက်သွားကြမှာပါ။
2) “ ကျွန်တော်တို့ပေးချင်တာကလွဲလို့ဘာမှအဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး။ မင်းစိတ်ဓာတ်ကျနေလား များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။
3) “ ငါတို့အလုပ်ကိုမကြိုက်တာဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့မိုးရွာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပေါင်နှံတာမဟုတ်ဘူး။.
4) “ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကအဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်သောအခါတစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီဘတ်ထရီတစ်လုံးထဲတပ်ဆင်ထားပုံရသည်။
5) "သင်ကျေးဇူးတင်သည့်အရာအားလုံးကိုချရေးပါ။ "
6) စိတ်ဖိစီးမှုကိုကျော်လွှားရန်သော့ချက်တစ်ခုမှာလက်ခံခြင်းသည်နုတ်ထွက်ခြင်းနှင့်မတူပါ။ လက်ခံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်မှန်သည်လက်ရှိဖြစ်ကြောင်းနှင့်နုတ်ထွက်ခြင်းသည်လက်နက်ချခြင်းဖြစ်သည်ဟုဝန်ခံသည်။ အကယ်၍ သင်စိတ်ဖိစီးမှုခံစားရပါက၎င်းကိုလက်ခံပြီး၎င်းကိုပြောင်းလဲရန်အသုံးပြုပါ။ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုသင်ကိုယ်တိုင်နုတ်ထွက်သည်မဟုတ်ပါ။ ».
7) ပညာရေးသည်သင်ပြောသည့်အရာမဟုတ်ပါ၊ ဘာပဲပြောပြောမင်းရဲ့လုပ်ရပ်တွေကမင်းအတွက်ပြောလိမ့်မယ်။
8) "ပျော်ရွှင်မှုကိုအတိတ်နဲ့အနာဂတ်မှာဘယ်တော့မှမဖြစ်၊ လက်ရှိမှာဖြစ်ပျက်နေတာကိုငါတို့နားလည်သည်အထိပျော်ရွှင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ".
9) "ကျွန်မအသက်ကြီးနေပြီးမရေမတွက်နိုင်တဲ့ကံမကောင်းအကြောင်းမလှပေမယ့်သူတို့အများစုဟာတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး"။ Mark Twain
11) "ပျော်ရွှင်မှုကရလဒ်မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါကသဘောထားပဲ".
12) "ဆင်ခြေအတွက်အကြောင်းပြချက်ကောင်းတွေအမြဲတမ်းရှာတယ်"။ Pilar Jericó။
13) "ဘဝမှာမင်းဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာကနေရှင်သန်နိုင်တယ်၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှလွတ်မြောက်နိုင်ပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာကကြောက်ရွံ့မှုအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးသည်။.
14) «ဘဝ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်အသိပညာမဟုတ်ပါ။ ဘဝ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်».
15) ပညာရေးကိုငါတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတိကျတဲ့စည်းမျဉ်းတွေအကြောင်းစဉ်းစားတယ်။ ဒါပေမယ့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမဟုတ်ဘဲဘ ၀ ရဲ့မြူခိုးကမီတာဝက်ထက်ကျော်လွန်ပြီးငါတို့ကိုမမြင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာငါတို့ကိုလမ်းညွှန်ပေးတဲ့စံနှုန်းတွေအကြောင်းပြောခြင်းဖြစ်တယ်။.
17) “ ကမ္ဘာကြီးဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နေပြီး၊ ပူးတွဲဖိုင်များကိုဖယ်ရှားပါ။။ ဗုဒ္ဓ
18) “ လူသာမန်အသက်ရှင်နေထိုင်ရန်သော့ချက်တစ်ခုမှာသေခြင်းသည်ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ကိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ အရာအားလုံး၊ လုံးဝအရာရာတိုင်းတွင်အစနှင့်အဆုံးရှိကြောင်းကိုနားလည်ပါ။ ».
19) အောင်မြင်မှုဆိုတာသင်လိုချင်တာကိုရဖို့ပါ။ ပျော်ရွှင်မှု, သင်ရရှိသောအရာကိုခံစားခြင်း။ အီမာဆင်။
20) မြစ်တစ်ပင်တည်းမှာနှစ်ခါရေချိုးလို့မရဘူး။ ဘဝစီးဆင်း။ သရဲ။
21) “ အရာရာတိုင်းဟာငါတို့ကိုမထိခိုက်စေပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့မှာအရာတွေရှိတယ်။ ငါတို့ရဲ့အတွင်းရေးဆွေးနွေးမှုရဲ့သားကောင်မဖြစ်ရဘူးလေ».
23) “ သစ်ပင်ကနေလဲကျရင်မြေပေါ်မှာပန်းသီးတွေများလာလိမ့်မယ်။ ”
24) ဘာကြောင့် ၀ မ်းနည်းရတာလဲလို့တွေးမိတဲ့အခါသူတစ်ပါးကိုကူညီဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။.
26) ဖြေရှင်းရန်ပြaနာတစ်ခုရှာပါ။ အခွင့်အလမ်းများကိုအမြဲတမ်းပြသနာများအဖြစ်ဖုံးကွယ်လာကြသည်».
27) "ကျနော်တို့ကရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအဆုံးသတ်နှင့်အတူစွဲလမ်းနေကြသည်။ သို့သော်ခန္ဓာကိုယ်သည်ရောဂါလက္ခဏာများမှတဆင့်မိမိကိုယ်ကိုအနာပျောက်စေသည်။ အကြောင်းရင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့စိုးရိမ်ကြပါစို့။ အကယ်၍ ခေါင်းကိုနာနေရင်၊ Aspirin သောက်ဖို့မပြေးတော့ဘဲ၊ ခေါင်းကဘာကြောင့်နာတာလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါ။ ».
28) နှစ်ပေါင်း ၁၄၀ မအသက်ရှင်နိုင်ရင်သောက်ကြ၊ သောက်ကြ၊ သောက်ကြတာ၊ Txumari Alfaro
31) လူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခက်အခဲများရှိသည်။ အချို့အတွက်အဘယ်အရာသည်အလွန်ရိုးရှင်းသနည်း၊ အခြားသူများအတွက်အလွန်ခက်ခဲသောစိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ».
32) "လူတစ် ဦး ချင်းစီဟာသူတို့ရဲ့သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့ဇုန်ကိုသတိထားရမယ်။.
33) "လူတစ်ယောက်စီမှာသူရဲကောင်းအနည်းငယ်၊ သူရဲကောင်းအနည်းငယ်ပဲရှိတယ်။ ".
34) “ အန္တရာယ်အလုံးစုံကိုကြိုမြင်သောသူသည်မည်သည့်အခါမျှပင်လယ်ကိုရွက်လွှင့်လိမ့်မည်မဟုတ်”.
35) «ငါတို့ချစ်သောသူတို့၏ပြtheနာများကိုဖြေရှင်းရန်မလုံလောက်။ သူတို့ကိုတာဝန်ယူပြီးအတားအဆီးတွေကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးရမယ်»။ အဲလ်ဆာပွန်နက်။
36) လူမှုရေးအရ၊ အောင်မြင်မှုကိုကျွနုပ်၏စိတ်ကူးတစ်ခုချမှတ်ခဲ့သည်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုစိတ်ကူးရှိရမည်။.
37) “ ပျော်ရွှင်မှုကိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးအလွန်တိကျသောသဘောထားဖြင့်လျှောက်လှမ်းခြင်းမှရရှိသောရလဒ်ဖြစ်သည်။ ဒီသဘောထားလေ့ကျင့်သင်ကြားနိုင်ပါသည်».
38) “ ပျော်ရွှင်မှုနှောင့်နှေးနေတဲ့ရောဂါခံစားနေရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီမှာတစ်ခုခုပြောင်းတဲ့အခါသူတို့ပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်လို့စိတ်ကူးယဉ်ကြတယ်။ "
39) "ငါတို့ရှိသမျှသည်ဆုလက်ဆောင်များနှင့်အစွမ်းအစနှင့်အတူစံလာ။ , သူတို့ကိုရှာဖွေနှင့်အခြားသူများရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ထားရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်".
40) “ နေ့ကိုသားကောင်အဖြစ်နဲ့တာ ၀ န်ခံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ပါတယ်။ ငါတို့ကပြseeingနာတွေကိုမမြင်ရတော့ဘူး၊.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » Motivational Phrase (အပြုသဘောဆောင်သောအတွေးဖြင့်ကြားရသော) ၄၀ ။
Augusto Cesar မွန်တီနီဂရိုး Laguna ဟုသူကပြောသည်
Augusto Cesar Montenegro Laguna အားပြန်ကြားပါ
သင်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဥာဏ်ရည်ရှိကြောင်းညွှန်ပြသောသဘောထား ၁၀ ခု